रोनाल्डो प्रतिबन्धमा पर्ने सम्भावना ! | Hamro Khelkud
रोनाल्डो प्रतिबन्धमा पर्ने सम्भावना !
म्याड्रिड (एजेन्सी)– रियल म्याड्रिडका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो फेरि प्रतिबन्धमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । गिरोनासँगको खेलका दौरान पेरे पोन्सलाई पेनाल्टी बक्स भित्र धलेका कारण रोनाल्डोमाथि कारवाहीको सम्भावना बढेको छ ।
मिररका अनुसार रोनाल्डो त्यो घटनाका कारण गम्भिर कारवाहीमा पर्न सक्नेछन् । पोर्चुगिज कप्तान यसअघि नै ५ खेलको प्रतिबन्धमा परिसकेका छन् । बार्सिलोनाविरुद्ध स्पेनिस सुपर कपको पहिलो खेलमा रेफ्रीलाई धकेलेका कारण उनी प्रतिबन्धमा परेका थिए । जसका कारण उनले सुपर कपको दोस्रो लेग र लिगका अन्य चार खेल गुमाएका थिए ।
रियल बेटिसको खेलमा उनले पुनरागमन त गरे तर टोलीले भने त्यो खेल गुमाउनु परेको थियो । त्यसयता टोलीले लगातार ४ खेल जित्यो । तर, आइतबार गिरोनासँग फेरि रियल स्तब्ध भएको थियो । रोनाल्डो हरसमय गोलका लागि संघर्ष गरिरहेपनि उनलाई सफलता मिलेन । जसले उनी बढी चिडिएको पनि हुन सक्दछ ।
पेनाल्टी बक्समा पोन्सले रोनाल्डोलाई मार्क गरिरहेका थिए । यद्दपी उनले रोनाल्डोलाई धेरै बाधा पुर्याएका थिएनन । बल आउने क्रममा जब क्रिस्टियानो अब आफुले नभेट्ने देखे त्यसपछि उनले पोन्सलाई धकले । बल अर्का रक्षकले क्लियर गरे । रोनाल्डोले हत्केलाले पोन्सलाई ठेल्दा उनी मैदानमा लडे । उनलाई त्यसै छाडेर रोनाल्डो त्यहाँबाट हिडे ।
अहिले रियल ला लिगामा दबाबमा छ । शीर्षस्थानको बार्सिलोनाभन्दा ८ अंकले पछाडि छ । यस्तोमा टोलीले रोनाल्डोबाट उच्च अपेक्षा राख्छ नै । तर उनको प्रतिबन्धको सम्भावनाले प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले उनी विनाको टोलीको तयारी गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्दछ ।